မေးမြန်းမှု အတတ်ပညာ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
23-02-2011, 03:15 PM
ဒီအကြောင်းကို ရေးချင်ခဲ့တာ ကြာပါပြီ - ဒီအကြောင်းကို ရေးဖို့ တွန်းအားပေးခဲ့တဲ့ သူတွေထဲမှာ မဖြစ်မနေ ကျေးဇူးတင်ရမယ့် သူတွေကတော့ ကိုနေမင်းမောင် ( စာချွန်လွှာပို့ပြီး ဖိုရမ်အတွက် လိုအပ်နေတာတွေ ကျွန်တော့်ကို အကြံပေးခဲ့တဲ့သူပါ ) - နောက်တစ်ယောက်က ကိုဘုရင့်နောင် ( သူကတော့ ဒီအကြောင်းအရာမှာ ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်တွေ ပါဝင်သင့်မယ်ဆိုတာ အကြံပေးခဲ့တဲ့ သူပါ ) - သူတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ တွန်းတိုက်အား မရှိပဲ ဒီအကြောင်းကို တော်ယုံ ရေးဖြစ်ခဲ့အုံးမယ် မထင်ဘူး - ခုတော့ အရင်က ရေးဖို့ တွေးမိတဲ့ စိတ်အခံရယ် - သူတို့ရဲ့ ကူညီမှုတွေကြောင့် ဖိုရမ်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တစ်ခု ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ဖြစ်လာပါတယ် - ရေးမယ့် အကြောင်းက - မေးမြန်းမှု အတတ်ပညာပါ -
ဖိုရမ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် - တစ်ခြား ပြင်ပလောကမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တစ်ခြားသူတစ်ယောက် မေးမြန်းလာသမျှကို တစ်ဖက်လူ အဆင်ပြေချောမွေ့သွားအောင် ဖြေကြားပေးနိုင်တဲ့ အားကိုးအားထား ပြုရသူကိုပဲ အတတ်ပညာ တတ်မြောက်ကျွမ်းကျင်သူလို့ သတ်မှတ်လို့ မရပါဘူး - ကိုယ်သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ ကိုယ်နားလည်ချင်တဲ့ သဘောတရားကို သိရှိနားလည်ပြီးသူ တစ်ယောက်ကနေ ဖြေဆိုချင်စိတ် ဖြစ်လာအောင် - ချက်ချင်းဖြေကြားမပေးနိုင်ရင်တောင် နောင်တစ်ချိန်မှာ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဖြေကြားလိုစိတ်ပေါ်လာအောင် မေးမြန်းနိုင်တာဟာလည်း အတတ်ပညာရပ်တစ်ခုပါပဲ - ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာ မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်ဆိုပြီး ဖြစ်လာပြီ - ဖိုရမ်ထဲမှာ သူ့ကဏ္ဍနဲ့ သူ တတ်မြောက် ကျွမ်းကျင်သူတွေ ရှိကြတယ် - ကဏ္ဍလိုက်မှာ ကိုယ်မသိနားမလည်တာတွေ ရှိရင် ဝင်ရောက်မေးမြန်းနိုင် သလို ကိုယ်သိနားလည်ထားတာ ရှိရင်လည်း တစ်ခြား အခက်အခဲ ဖြစ်နေသူ တစ်ယောက်အတွက် တစ်ဖက်တစ်လှမ်းကနေ ဝင်ရောက်ကူညီနိုင်ပါတယ် - ဒီသဘောကို ရေးခဲ့ပြီးတဲ့ မျှဝေသူဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဖော်ပြပေးခဲ့ဖူးပါပြီ - ကိုယ်သိနားလည်ထားတာတွေကို တစ်ခြား အခက်အခဲ ဖြစ်နေသူတစ်ယောက်ကို ကူညီနိုင်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုစိတ်ခံယူချက်မျိုးနဲ့ ကူညီရမယ် ဆိုတာကိုလည်း မျှဝေသူတစ်ယောက် သိရှိထားရမည့် အချက်များမှာ အဘယ်နည်း။ - မျှဝေသူများတွင် ပြည့်စုံရမည့် အချက်များမှာ အဘယ်နည်း။ ဆိုပြီး ရေးပြီးခဲ့ပါပြီ - အဲ့တော့ လိုအပ်ချက်တစ်ခု ရှိနေပါသေးတယ် - ကိုယ်မသိနားမလည်တာတွေကို ဝင်ရောက် မေးမြန်းတဲ့ နေရာမှာရော ဘယ်လို အချက်အလက်တွေပေါ် အခြေခံပြီး ရေးသားမေးမြန်းရပါမလဲ - ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်ခံယူချက်မျိုး ထားရှိရပါမလဲ - အဲ့လို မေးမြန်းသူတစ်ယောက်အတွက် သိထားဖို့ လိုအပ်မယ့် အချက်အလက်တွေ အကြောင်းကို စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ် -
မေးခွန်းမမေးမီ သိရှိသင့်သည့် အချက်များ
အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ဖိုရမ်မှာ Thread အသစ်တင်ပြီး ဖြစ်စေ - ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူ တစ်ယောက်ကို စာချွန်လွှာပို့ပြီး ဖြစ်စေ - မမေးမြန်းခင်မှာ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်တွေကို အရင်ဦးဆုံး လုပ်ဆောင်ထား ခဲ့ပြီးသား ဖြစ်သင့်ပါတယ် -
ဖိုရမ်ထဲမှာ မိမိမေးမြန်းလိုတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဦးစွာဖြေကြား ပေးထားပြီးမှု ရှိမရှိ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ။
မိမိမေးမြန်းလိုတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Web ပေါ်မှာ ဖြေဆိုပြီးသား ရှိမရှိ ရှာဖွေကြည့်ပါ။
မိမိမေးမြန်းလိုတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ ဆက်စပ်ပတ်သတ်နေတဲ့ Manual တွေကနေတစ်ဆင့် အဖြေတွေ့အောင် ရှာဖွေကြည့်ပါ။
FAQs လို့ခေါ်တဲ့ Users တိုင်း မကြာခဏ မေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေမှာ ကိုယ်မေးမြန်းလိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ပါဝင်မှု ရှိမရှိ လေ့လာကြည့်ပါ။
အဖြေတွေ့နိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ အတွေ့အကြုံ - စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကနေ ချဉ်းကပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြည့်ပါ။
ကျွမ်းကျင်နားလည်မှု ရှိတယ်လို့ သေချာပေါက် ကိုယ်သိထားတဲ့ အသိမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကို မေးမြန်းကြည့်ပါ။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က Programmer တစ်ယောက်ဆိုရင် ကိုယ်တွေ့ချင်တဲ့ အဖြေကို Source code တွေဖတ်ပြီး ရှာတွေ့နိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါ။
မမေးခင် လေ့လာပါ။ မိမိ မေးမြန်းလိုတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို မေးခွန်းထုတ်ပြီး စတင်မေးမြန်းတော့မယ်ဆိုရင် မေးခွန်းမစတင်ခင်မှာ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကိုယ့်ဘက်က ဘာတွေ အဦးဆုံး လေ့လာထားခဲ့ပြီးပြီလဲ - ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားခဲ့သလဲ - စတဲ့ ပြဿနာရပ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကိုယ့်ဘက်မှာ မမေးမြန်းခင်တည်းက ကြိုးစားခဲ့တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဦးစွာဖော်ပြသင့်ပါတယ် - ဒီလို ဖော်ပြထားခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်ဟာ ငပျင်းတစ်ယောက် မဟုတ်ဘူး - ကိုယ်သိချင်တာကို ကိုယ်အရင်တွေ့အောင်ရှာတယ် - ရှာလို့ဘယ်လိုမှ မတွေ့နိုင်တော့မှ ( သို့တည်းမဟုတ် ) နားလည်ဖို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တော့မှ တစ်ဖက်လူရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေကို စာနာမှုနဲ့ မေးမြန်းတယ် ဆိုတာမျိုး မေးမြန်းခံရသူ နားလည်အောင် အရင်ဦးဆုံး ကြိုးစားဖော်ပြသင့်ပါတယ် - ဒီ့ထက်မှ ကိုယ့်မေးမြန်းချက်ကို ပိုပြီး တန်ဖိုးရှိစေ ချင်သေးတယ် ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုထဲက ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အဖြေကို ရှာမတွေ့ခဲ့ပေမယ့် ဘယ်အကြောင်း အရာတွေကို နားလည်ခဲ့တယ် - ဘာတွေကိုတော့ မှတ်သားစရာ ရခဲ့တယ် ဆိုတာမျိုး တစ်ခြားသူတွေ အတွက် ချပြသင့်ပါတယ်။
အားလုံးထဲမှာ ကိုယ်သိနားလည်ချင်တဲ့ အရာကို အလွယ်ကူအလျင်မြန်ဆုံး ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကတော့ Google search ကို အသုံးပြုပြီး ရှာဖွေတဲ့လမ်းစဉ်ပါပဲ - တကယ်လို့ အဲ့လိုရှာလို့မှ မတွေ့ခဲ့ဘူး ဆိုရင်လည်း "မေးမြန်းချက်ကို ရေးသားတဲ့ အချိန်မှာ - ကျွန်တော်/ကျွန်မတော့ ဒီစကားစုတွေနဲ့ Google ကိုသွားပြီး ရှာခဲ့တယ် - ဒါပေမယ့် စိတ်ကျေနပ်လောက်စရာ ဘာအဖြေတစ်ခုမှ မရခဲ့ဘူး" ဆိုတာမျိုး ထည့်သွင်း ဖော်ပြသင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် ကိုယ်ရှာဖွေခဲ့တုန်းက အဆင်မပြေခဲ့တဲ့ Search terms ဟာ ကိုယ့်ကို ဖြေကြားပေးမယ့် သူအတွက်လည်း ထည့်စဉ်းစားဖို့ မလိုတော့ဘူး ဆိုတာ တစ်ဖက်လှည့်နဲ့ သိသာစေလို့ပါပဲ။ နောက်တစ်ချက် ရှိသေးတာ အဲ့လို ဖော်ပြလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်နဲ့ ပြဿနာတူညီ ဖြစ်ဖူးသူ တစ်ယောက်က ဒီအကြောင်းအရာကို တွေ့ရှိပြီး - သူပြဿနာ ဖြစ်ခဲ့တုန်းက ပြေလည်ခဲ့တဲ့ Search terms ကို ညွှန်ပြပေးဖို့ အတွက် ရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ် - ဒီနည်းနဲ့ ကိုယ်လိုလားတဲ့ အဖြေကို ခဏချင်း ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
စဉ်းစားရခက်တဲ့ အဖြေတစ်ခုကို Google လိုမျိုး Enter တစ်ချက်ခေါက်တာနဲ့ ချက်ချင်းအဖြေပြန်ရဖို့ မမျှော်လင့်ပါနဲ့ - အချိန်ပေးပါ - စာဖတ်ပါ - အကြောင်းအရာနဲ့ သက်ဆိုင်နေတဲ့ FAQs တွေကို နားလည်ခဲ့ပြီလား သေချာပြန်ဆန်းစစ်ပါ - ဖတ်ပြီးရင် ခဏလောက်နားပါ - ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ယောက်ကို မမေးခင် ဒီပြဿနာကိုပဲ နောက်တစ်ခေါက် ပြန်တွေးကြည့်ပါ - မယုံမရှိပါနဲ့ - ကျွမ်းကျင်နားလည်ပြီးသား သူတစ်ယောက်ဟာ မေးမြန်းသူဆီက ရလာတဲ့ မေးခွန်းရဲ့ အသွားအလာကို ကြည့်ယုံနဲ့ ကိုယ်ဘယ်လောက် စာဖတ်ထားသလဲ ?? မမေးခင် ကိုယ်ဘာတွေ တွေးထားခဲ့ပြီးပြီလဲ ဆိုတာ ဒက်ကနဲ သဘောပေါက်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီ့အခြေအနေတွကို ကျွမ်းကျင်သူက သိရှိသွားတာနဲ့ မေးမြန်းသူရဲ့ အားထုတ်ခဲ့မှုပေါ် မူတည်ပြီး ကူညီပံ့ပိုးလိုစိတ်က အလိုလို ဖြစ်တည်လာတတ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး မေးခွန်းအများကြီးကို တစ်ဗရိတ်တည်းနဲ့ တရစပ်ပစ်မသွင်းပါနဲ့ - ဘာကြောင့်လဲဆို ကိုယ်မေးတဲ့ မေးခွန်းအတွက် ဘာအဖြေတစ်ခုမှ ပြန်မရပဲ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် - ( ဒါမှမဟုတ် အနှစ်သာရ မရှိတဲ့ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် အဖြေတွေ ဗျောက်သောက် ပြန်ရပါလိမ့်မယ် )
ကိုယ့်မေးခွန်းအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ - မေးခွန်းကိုကြည့်ပြီး ပြန်တွေးပါ - ပြီးစလွယ် စီးစလွယ်မေးတဲ့ မေးခွန်းမျိုးဟာ ပြီးစလွယ် စီးစလွယ်အဖြေပဲ ပြန်ရပါလိမ့်မယ် ( ဒါမှမဟုတ် ဘာတစ်ခုမှ ပြန်မရ တတ်ပါဘူး ) - တတ်ယောင်ကား ပုံစံမျိုးနဲ့ မေးခွန်းမမေးမိစေဖို့ကိုလည်း ဂရုပြုပါ - တတ်ယောင်ကား လုပ်ပြီး ( မသိလို့မေးတာ မဟုတ်ဘူး - ငါကသိတယ် - ဒါလေး မင်းများဆွေးနွေးပေး နိုင်မလားလို့ မေးတာ ဆိုတဲ့ အထက်စီးက မေးတဲ့ပုံစံမျိုး ) ယူဆချက် အမှားပေါ် အခြေခံပြီး မေးထားတဲ့ မေးခွန်းမျိုးဟာ မြန်မာလူမျိုး ဖြေကြားပေးမယ့်သူ တစ်ယောက်အတွက် အားတုံ့အားနာဖြစ်စေသလို - လိုလားချက်နဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ ယူဆချက်အမှားကို ပြန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရတာနဲ့တင်ပဲ မလိုအပ်ပဲ အချိန်အမြောက်အများ ကုန်ဆုံးစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်ထင်မြင်ချက်ကို နောက်မှာထားပြီး လက်တွေ့ နားလည်သိရှိမှုကိုပဲ မေးမြန်းမှု အကြောင်းအရာမှာ ဦးစားပေးတင်ပြပါ။
ကိုယ့်မေးခွန်းအတွက် အဖြေပြန်ရကို ရလိမ့်မယ်/ဖြေကို ဖြေပေးရမယ်လို့ ဘယ်တော့မှ တစ်ထစ်ချ ယုံကြည်မထားပါနဲ့ - ဘယ်တော့မှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး - ဖိုရမ်တစ်ခုရဲ့ သဘောတရားဟာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် စာနာနားလည်စိတ်နဲ့ ငွေကြေးအမြတ်အစွန်း တစ်စွန်းတစ်စ မယူပဲ မိသားစုဝင်အချင်းချင်း ကူညီဖေးမ လည်ပတ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ် - ငွေပေးမေးမြန်းနေတာ မဟုတ်ပါဘူး - ကိုယ်မေးမြန်းတဲ့ အကြောင်းအရာဟာ စဉ်းစားပေးဖို့ သင့်သလား - စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းသလား - ဘယ်လိုပြဿနာရပ်တွေပေါ်မှာ အခြေခံထားသလဲ - ဒီမေးခွန်းကနေ ဘယ်လို အတွေ့အကြုံဗဟုသုတတွေ ရနိုင်သလဲ - စဉ်းစားသင့်တဲ့ ပြဿလေးတွေက ဘာတွေလဲ .... စတဲ့ အခြေအနေတွေပေါ် မူတည်ပြီး ပြန်ကြားချက်တွေ ရရှိလာပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဖက်လှည့်နဲ့ နားလည်လွယ်အောင် ပြောရရင် - ကိုယ်ရဲ့ ဖော်ပြချက် မေးခွန်းထဲမှာ -
" ဒီပြဿနာရပ်အတွက် ကျွန်တော်လုပ်ဆောင်ရမယ့် လုပ်ဆောင်နည်း အသေးစိတ်ကို သေသေချာချာလေး ရေးပေးပါ " ဆိုတာမျိုးထက်
" ဒီပြဿနာရပ်အတွက် တစ်ယောက်ယောက်များ လိုအပ်ချက်ကို ထောက်ပြနိုင်မလား ??"
" ဒီပြဿနာရပ်အတွက် ကျွန်တော့်ရဲ့ လေ့လာမှုထဲမှာ ဘာတွေများ လိုအပ်ချက် ရှိနေပါသလဲ ?? "
" ဒီပြဿနာရပ်အတွက် ဘယ်လိုနေရာများတွေကိုများ လေ့လာဖို့ သင့်ပါသလဲ ?? "
စတဲ့ ဖော်ပြချက်မျိုးတွေက ကိုယ့်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ဒီပြဿနာရပ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကိုယ်တကယ် သိနားလည်လိုစိတ် ပြင်းပြနေတယ် ဆိုတာကို သိသာစေသလို ဖြေကြားပေးသူ အပေါ်မှာလည်း တစ်ဖက်လူရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေအတွက် စာနာနားလည်တဲ့ သဘော သက်ရောက်စေပါတယ်။
Last edited by KznT; 23-02-2011 at 08:17 PM..
ကိုခိုင်ကြီး, ကိုစံငြိမ်း, ကိုပျင်း, ကိုဦး, ခင်မျိုးစစ်, ချစ်သမီး, ချယ်ရီမင်း, ခွန်ညီး, စွမ်းကမ္ဘာ, စနိုးလေး, ဆန်းမောင်, ဆရာကျောင်း, ဇင်ယော်, ဇာနည်စိုး, တာတာ, တီဘွား, ဒဿဂီရိ, မိုးတိန်, မျိုးလေး, ယွန်းယွန်း, ယွမ်ယွမ်, ရှင်းသန့်, လမင်းမျက်နှာ, လမ်းပြကြယ်, ဝင်းကျော်ဦး, ဝင်းအောင်, သန့်ဇင်ဌေး, သားညို, ဟန်မိုးလွင်, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ကျော်ကျော်မောင်, ခေါက်ရောင်းသား, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, ဇော်ရဲပိုင်, တောဂေါ်လီ, နေမင်းမောင်, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), မောင်သံသရာ, ဟေမာန်ဆောင်း, အောင်မော်, အေးမင်းမောင်, ဝေယံ, ဝေဖြိုးအောင်, ငြိမ်းချမ်း, ဖြိုးကောင်းကင်, နိုးတူး, Aung Aung, aung.123a, aungthuphyo, AZM, azp09, bagothar85, Bayint Naung, bonge, crush, frogfish, g00gle, green leaf, hellboy, jesse, july20, juwathan, kaung kin lu, khaing king, kkawave, ko lin, kwarsi, kyaukphyu, LaMike, Ma Ei, maJunior, MilkyWay, minnthu, minthike, minthumon, moe cho, moe san dar, moethout, moe_poung, nweni1972, Nyi Nyi Zaw, nyi.nyi, pannuko, phoetharlay, phoopyaitsone, phyulayswe07, pyaephyoaung947, PyaitSone, shinthantnyein, smlat88, someone22, stupid, Thein Than, thetzin, thureinsoe, tu tu, victor10, yawnathan, Ye Aung, yelinoo, zinkomin, zo
24-02-2011, 07:10 PM
ပြန်စာ - မေးမြန်းမှု အတတ်ပညာ
မေးခွန်းမေးလျှင် သိရှိရမည့် အချက်များ
အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့ မေးခွန်းမမေးမီ သိရှိသင့်တဲ့ အချက်တွေ ကို လေ့လာခဲ့ပြီးပြီ ဆိုရင် မေးခွန်းမေးတဲ့ အခါမှာ ဂရုပြုသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဆက်လက်ဖော်ပြသွားပါ့မယ်။
မေးမြန်းရမည့် နေရာအား သေချာစွာ ရွေးချယ်ပါ။ - ဒီအချက်က သိပ်ကို အရေးကြီးပါတယ် - မေးခွန်းမေးမြန်းတဲ့ နေရာမှာ မေးမြန်းသင့်တဲ့ နေရာမှာ မမေးမြန်းပဲ မမေးမြန်းသင့်တဲ့ နေရာမှာ မေးမြန်းမယ် ဆိုရင် လူ့စိတ်သဘာဝရအရ တိုက်ရိုက်ဖွင့်မပြောကြဘူး ဆိုရင်တောင် ကိုယ်မေးလိုက်တဲ့ မေးခွန်းကို တစ်ဘက်လူက မသိကျိုးကျွံပြုတာမျိုး/ကိုယ်နားလည်ချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို Reply ပြန်မရတာမျိုး ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ် - ဒီအခြေအနေတွေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဖိုရမ်ထိန်းသိမ်းသူများဘက်က မေးမြန်းလာတဲ့ မေးခွန်းတွေကို သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ အသီးသီးအောက် ရောက်ရှိအောင် ရွှေ့ပြောင်းပေးနေတာမျိုး ရှိပါတယ် - ဒါပေမယ့် တတ်နိုင်မယ်ဆိုရင် မေးခွန်းစတင် မေးမြန်းမယ် ဆိုကတည်းက ကိုယ်မေးရမယ့် နေရာကို သတိပြု ရွေးချယ်ကြတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ - ကိုယ့်အခက်အခဲ/ပြဿနာရပ် အသီးသီးကို ဘယ်ကဏ္ဍတွေမှာ ဝင်ရောက်မေးမြန်းနိုင်မလဲ ဆိုတာ သိချင်မယ်ဆိုရင် မည်သည့်နေရာမှ စတင်လေ့လာရမည်နည်း။ ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ဖတ်ရှု့လေ့လာပြီး ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
မမေးမြန်းသင့်သော နေရာများအား ရှောင်ကျဉ်ပါ။ - မေးခွန်းမေးမြန်း တော့မယ် ဆိုရင် မေးမြန်းသင့်တဲ့ နေရာတွေကို ရွေးချယ်တတ်ဖို့ လိုသလို မမေးမြန်းသင့်တဲ့ နေရာတွေကို ရှောင်ရှားတတ်ဖို့လည်း လိုပါတယ် - မိသားစုဝင်များ မှတ်သားထားသင့်တဲ့ ဖိုရမ်တစ်ခုရဲ့ မမေးမြန်းသင့်တဲ့ နေရာတွေကို အောက်မှာ စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဖိုရမ်တွင်းရှိ လူသိနည်း/ လူစိတ်ဝင်စားမှုနည်း/ အသက်မဝင်တော့သော Topic များအောက်၌ မေးခွန်းဝင်ရောက် မေးမြန်းခြင်း။
အခြေခံကျသော မေးခွန်းများအား ( Gtalk နဲ့ Gmail ဘာကွာလဲ ?? ) အကြောင်းအရာကြီးများ ရေးသားနေသောနေရာ အောက်၌ ( သို့တည်းမဟုတ် ) ခေါင်းစဉ်ကြီးများ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးနေသော နေရာများအောက်၌ ကြားဖြတ်ဝင်ရောက် မေးမြန်းခြင်း။
မေးခွန်းတစ်မျိုးတည်းအား ဖိုရမ်၏ နေရာပေါင်းစုံ၌ ထပ်ခါတစ်လဲလဲ ဝင်ရောက်မေးမြန်းခြင်း။
မိမိနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ ရင်းနှီးမှု မရှိသောသူ ( သို့မဟုတ် ) မိမိ၏ ပြဿနာအား ဖြေကြားပေးရန် ဝတ္တရား မရှိသူအား စာချွန်လွှာ/E-mails များ ပေးပို့မေးမြန်းခြင်း။
အထက်ဖော်ပြပါ လုပ်ဆောင်ချက်မျိုးတွေဟာ လူအများစုနဲ့ လည်ပတ်ရပ်တည်နေတဲ့ ဖိုရမ်တွေမှာ ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူကြောင့် ဖိုရမ်ဝင်ရောက်နေသူ လူတစ်ဖက်သား စိတ်ကသိကအောက် မဖြစ်ရအောင် သတိထားရှောင်ကျဉ်သင့်တဲ့ အချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ချက်ချင်းလက်ငင်း သိလိုသော အကြောင်းအရာများအတွက် မိမိကိုယ်ကိုယ် အားကိုးပါ - ဘယ်နားမေး ရမှန်းလည်း ချက်ချင်း မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူး - မေးခွန်းကိုလည်း အမြန်ဆုံး သိချင်နေပြီ ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး ဖြစ်နေရင် ဖိုရမ်မှာ မေးဖို့ ကြိုးစားတာထက် အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီးသလို မိမိမေးမြန်းလိုတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Web ပေါ်မှာ ဖြေဆိုပြီးသား ရှိမရှိ အရင်ဦးဆုံး ရှာဖွေကြည့်ပါ။ Google မှာ မေးမြန်းခြင်းဆိုတာ ဖိုရမ်တစ်ခုမှာ ကမကထပြုနေတဲ့ ဖြေကြားပေးသူတွေကိုယ်တိုင် အားကိုး အားထား ပြုနေရတာ ဖြစ်ပါတယ် - ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ လူပေါင်းစုံ - ဘက်ပေါင်းစုံ -ကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေ မေးမြန်းလာတဲ့ အကြောင်းအရာတိုင်းကို ဖြေကြားပေးနိုင်စွမ်း မရှိကြသေးပါဘူး - သူတို့တွေလည်း Search Engines ( Google ... ) ကို အားကိုးနေကြရတာ ဖြစ်ပါတယ် - ဒါကို သတိပြုမိဖို့ လိုပါတယ် - မိမိရဲ့ ပင်ကိုယ်အစွမ်းအစကို မိမိဘာသာအားကိုးပြီး ရှာယူမယ် ဆိုရင် ကိုယ်လိုလားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေဟာ ဘယ်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ အားကိုးစရာမလိုပဲ အင်တာနက်ရှိနေတဲ့ ကိုယ့်လက်တကမ်းမှာ လှမ်းယူ ထိတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတာ သတိထားမိလာပါလိမ့်မယ်။ Google နဲ့ ရှာဖွေရာမှာ အသုံးပြုသင့်တဲ့ Google Search Operators တွေကို ဒီနေရာမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့မှ Google Search Operators တွေလေ့လာရမှာ စိတ်မဝင်စားသေးဘူး ဆိုရင်လည်း အခြေခံ အနေနဲ့ -
Software, E-books, Videos, OS, နိုင်ငံခြားသီချင်းတွေ ရှာဖွေနိုင်ဖို့ - ဒီနေရာမှာ ဖတ်ပါ။
မြန်မာသီချင်းတွေ ရှာဖွေဖို့ ဒေါင်းလုပ်ချနိုင်ဖို့ - ဒီနေရာမှာ ဖတ်ပါ။
ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲ လုပ်ဆောင်နည်းတွေကို သိချင်ရင် Google Search မှာ ရှာဖွေတဲ့အခါ - How To ကို အမြဲသုံးပါ - ( ဥပမာ - Windows7ဘယ်လိုတင်ရမှန်း မသိဘူး - ဒါဆို how to install windows 7, Facebook ဘယ်လိုသုံးရမှန်း မသိဘူး - ဒါဆို how to use facebook, Windows7နဲ့ Ubuntu Dual boot တင်ချင်တယ် ဘယ်လိုတင်ရမှန်း မသိဘူး - ဒါဆို how to dual boot windows7and ubuntu .. စသဖြင့် )
ဒီ့ထက်မှ နည်းနည်း အသေးစိတ်ပြီး Step by Step ကိုယ်က သိချင်တာ ဆိုရင် ကိုယ်သိချင်တဲ့ Process အမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး မေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာရှေ့မှာ Step by Step ဆိုတာလေး ထည့်မေးပါ - ( ဥပမာ Windows7installation လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့် ကို သိချင်တယ် ဆိုရင် - step by step windows7installation guide ဆိုတာမျိုး - Ubuntu 10.10 ရဲ့ installation လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့် ကို သိချင်တယ် ဆိုရင် step by step ubuntu 10.10 installation guide ဆိုတာမျိုး Google မှာမေးမြန်းလိုက်ပါ )
တကယ်လို့ ကိုယ်က အခေါ်အဝေါ်တစ်ခုခုရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို မသိဘူး အသုံးချပုံကို မသိဘူး ဆိုရင် Google မှာဖြစ်စေ - Wikipedia မှာဖြစ်စေ လူသိများတဲ့ အကြောင်းအရာဆို 90% လောက်ထိ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ် - ( ဥပမာ RAM ဘာမှန်း မသိဘူး ဆိုကြပါစို့ ဒါဆို Google မှာ တစ်ခြားရှေ့ဆက်နောက်ဆက် ဘာစာလုံးမှ ဆက်မသုံးပဲ ရိုးရိုးလေး RAM လို့သာ ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ - ခုလိုမျိုး တွေ့ရပါလိမ့်မယ် - အဲ့မှာဖော်ပြထားတဲ့ Links တွေကနေပြီး နောက်ဆက်တွဲ အကျယ်သိချင်သေးမယ် ဆိုရင် en.wikipedia.org ဆိုတဲ့ URL ကို Target ထားပြီးလိုက်ပါ - ဒါဆို ကိုယ်သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာရဲ့ အကြမ်းဖျဉ်းကို ချက်ချင်းသိနိုင်ပါတယ် )
တကယ်လို့ ကိုယ်သိချင်တာ Software တစ်ခုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အခြေခံ အသုံးချနည်း မသိတာမျိုး - Install လုပ်ဆောင်နည်း မသိတာမျိုး ဖြစ်နေရင်တော့ Google မှာ ရှာဖွေတာထက် သက်ဆိုင်ရာ Software ဖြန့်ဖြူးတဲ့ မူရင်း Website က FAQs (Frequently Asked Questions) တွေ - Help ကဏ္ဍ တွေမှာ မိမိရဲ့ ပြဿနာကို သွားရောက် ရှာဖွေသင့်ပါတယ်။
ဒါတွေက အခြေခံ အသုံးတွေပါ - ဒီအခြေခံလေးတွေ သိထားယုံနဲ့တင် ပြဿနာရဲ့ ၅၀% လောက်ကို Google ကနေပြီး ဖြေရှင်းပေးနိုင်တာ သတိထားမိပါလိမ့်မယ် -
အများစုအား ဦးတည်မေးမြန်းပါ - ကိုယ်မေးမြန်းလိုတဲ့ အကြောင်းအရာကို ရင်းနှီးသူ တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ နာမည်တပ် မေးမြန်းခြင်းမျိုးထက် ဖိုရမ်တစ်ခုရဲ့ ရပ်တည်ပုံအတိုင်း ကိုယ့်မေးမြန်းချက်ကို လူအများက ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်လာအောင် မေးမြန်းတာမျိုးက ပိုပြီး သင့်တော်ပါ တယ် - ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းကို ဦးတည်မေးမြန်းခြင်းအားဖြင့် အခြား မိသားစုဝင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီမေးမြန်းတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကိုယ်က သိရှိထားမယ် ဆိုရင်တောင် ဝင်ရောက်ဖြေကြားပေးဖို့ တွန့်ဆုတ်စေပါတယ် - ဒါ့အပြင် ကိုယ်ဦးတည် မေးမြန်းသူက အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြန်လည်ဖြေကြားဖို့ မအားလပ်နိုင် ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေမျိုး ရောက်ရှိနေမယ် ဆိုရင်လည်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အားတုံ့အားနာ အခြေအနေမျိုးတွေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
Last edited by KznT; 24-02-2011 at 11:24 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 59 ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, ချစ်သမီး, ခွန်ညီး, စွမ်းကမ္ဘာ, စနိုးလေး, ဇင်ယော်, တာတာ, ဒဿဂီရိ, မျိုးလေး, ယွန်းယွန်း, ရှင်းသန့်, လမင်းမျက်နှာ, ဝင်းအောင်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ကျော်ကျော်မောင်, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, ဇော်ရဲပိုင်, တောဂေါ်လီ, နေမင်းမောင်, မောင်သံသရာ, အေးမင်းမောင်, ငြိမ်းချမ်း, နှင်း, ah nai, arkaraung, Aung Aung, aungthuphyo, bagothar85, bonge, crush, Empathlover, frogfish, g00gle, hellboy, jesse, july20, kaung kin lu, khaing king, kkawave, kyaukphyu, maJunior, minthike, minthumon, moe san dar, moethout, moe_poung, Nyi Nyi Zaw, phoetharlay, phoopyaitsone, pyaephyoaung947, PyaitSone, smlat88, someone22, Thein Than, tu tu, victor10, Ye Aung, zo
ဒီ မေးမြန်းမှု အတတ်ပညာက အမုန်းခံပြီး ရေးနေရတာပါ - လူတိုင်းက မေးရင်သာ အဖြေလိုချင်တာ ဘယ်လိုအချက်တွေ လိုက်နာပြီး မေးပါလို့ အမေးခံရတဲ့သူက လမ်းညွှန်ရင်ကျတော့ သူသူကိုယ်ကိုယ် သဘောမကျချင်ကြဘူး - မြန်မာလူမျိုးက ကိုယ့်ထမင်း ကိုယ်စားပြီး အမုန်းခံရတာမျိုး မလိုချင်ကြတော့ စိတ်ကသာ မကြိုက်တာ ပြန်တော့ မပြောတတ်ကြဘူး ( နောက်ကွယ်မှာ ပြောတာမျိုး တော့ လုပ်တတ်ကြတယ် ) အဲ့လို မပြောတာတွေ များလာတော့ မေးတဲ့သူက ဘယ်လိုမေးရမှန်း မသိဘူး - မသိတော့ ဒီအတိုင်းပဲ ထပ်ခါ ထပ်ခါမေး - နောက်ဆုံးကျတော့ မေးသာမေးပြီး အဖြေပြန်မရတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေ အများကြီး ဖြစ်ဖြစ်လာတယ် -
အမေးသာရှိပြီး အဖြေပြန်မရတာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာဖိုရမ်တွေမှာမှ မဟုတ်ဘူး - နိုင်ငံခြားဖိုရမ်တွေ - Discussion groups တွေမှာလည်း အများကြီး ရှိတယ် - အဓိကက
မေးခွန်း မေးမြန်းပုံ မေးမြန်းနည်း ကို မေးမြန်းမယ့်သူတွေ နားမလည်ကြတာ
ဒီ အချက် သုံးခုထဲက မေးသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ - မေးမြန်းသင့်တဲ့ နေရာဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ချက် တွေ အကြောင်းကို ကျွန်တော် ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ - ခု နောက်ဆုံး ဖော်ပြချင်တာ မေးခွန်းမေးမြန်းပုံ မေးမြန်းနည်း ကို မေးမြန်းသူဘက်က မကြည့်ပဲ ဖြေကြားသူဘက်က မေးခွန်းပေါ် ရှုမြင်တဲ့ အမြင် ပုံစံမျိုးနဲ့ ဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်။
ဖြေကြားသူများ မည်သည့် မေးခွန်းမျိုး ရှောင်တတ်ကြသနည်း။
ဖော်ပြချက် မပြည့်စုံသော - ရည်ရွယ်ချက် မတိကျသော မေးခွန်းများအား ဖြေကြားသူများ ရှောင်တတ်ပါသည်။ - Forums တွေမှာ မေးမြန်းတာမျိုး ဖြစ်စေ - Discussion groups တွေမှာ ဆွေးနွေးချင်တာမျိုး ဖြစ်စေ - ရည်ရွယ်ချက် မတိကျတဲ့ ဖော်ပြချက် မပြည့်စုံတဲ့ မေးမြန်းမှုမျိုးတွေကို ဖြေကြားသူတွေ ရှောင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဖော်ပြချက် ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ တိကျတဲ့ မေးခွန်းဖြစ်အောင် Stupid နဲ့ Smart မေးမြန်းပုံ အဆင့်ဆင့်ကို နှိုင်းယှဉ်ပြလိုက်ပါတယ်။
Stupid - ကူညီပါဦး - ကျွန်တော့် Laptop က အခွေကြည့်ရင်းနဲ့ ဘာဖြစ်သွားမှန်း မသိဘူး - ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆို အမြန်ဆုံး ကူညီပေးပါ။
Smart - ကျွန်တော့် Laptop အမျိုးအစားက SAMAUNG ..??... ပါ - Windows ..??.. / Linux Distros ..??.. တင်ထားပါတယ် - 32/64 bit Operating system ပါ - RAM က .??.. GB ပါ - VGA အမျိုးအစားက ?? ... , ..??. GB ပါ - ဖြစ်တာက ..??.. စက်က Hang ပြီး ဘာမှဆက်လုပ်လို့ မရပဲ စာတက်လာပါတယ် - အရင်က အားလုံး ကောင်းပါတယ်။ မနက်က Update ပေးပြီး / Software ?? တစ်ခုတင်လိုက်မိပါတယ် - ဒီ ပြဿနာ အတွက် ကျွန်တော် ဘယ်လိုနည်းမျိုးနဲ့ ပြေလည်နိုင်မယ် ဆိုတာ သိပါရစေ။
Smarter - ကျွန်တော့် Laptop အမျိုးအစားက SAMAUNG .??... ပါ - Windows ..??.. / Linux ..??.. တင်ထားပါတယ် - 32/64 bit ..??.. Operating system ပါ - RAM က ..??.. GB ပါ - VGA အမျိုးအစားက ..??.. , ..??. GB ပါ - ဖြစ်တာက ..??.. စက်က Hang ပြီး ဘာမှဆက်လုပ်လို့ မရပဲ စာတက်လာပါတယ် - တက်လာတဲ့ စာက " ....... " ပါ - Screenshots ကို အောက်မှာ ကြည့်ပါ - အရင်က အားလုံး ကောင်းပါတယ်။ မနက်က Windows Update ပေးပြီး / Software ?? တစ်ခု တင်လိုက်မိပါတယ်။ ဆိုင်မဆိုင် ကျွန်တော် မသိပေမယ့် ကျွန်တော် System Restore လုပ်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်တာလည်း Windows ထဲကနေ Restore လုပ်လို့ မရဖြစ်နေပါတယ် - တစ်ခြား နည်းလမ်းလည်း ကျွန်တော် မသိတော့ဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီ ပြဿနာ အတွက် ကျွန်တော် ဘယ်လိုနည်းမျိုးနဲ့ ပြေလည်နိုင်လောက်မယ် / တစ်ခြား ဘယ်နေရာတွေမှာ လေ့လာနိုင်မယ်ဆိုတာ အကြံဥာဏ်လေးများ သိပါရစေ။
ခုလို အခြေအနေမှာပဲ တစ်ချို့မိသားစုဝင်တွေက အထက်မှာ ဖော်ပြထားသလို ပြောချင်ကြရှာပေမယ့် ကိုယ့်စက်ရဲ့ ဘယ်နေရာမှာ ဘာရှိတယ်ဆိုတာ မသိဘူး - တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရရင် ကိုယ့်စက်ရဲ့ System informations ကို ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုကြည့်ပြီး ဘာကို ဘယ်လို ပြောရမှန်း မသိကြတာမျိုး ရှိပါသေးတယ် - အဲ့လို ဖြစ်ရင် စိတ်မညစ်ပါနဲ့ - အဲ့လို မိသားစုဝင်တွေ အတွက်အကောင်းဆုံးက Software တစ်ခု ရှိပါတယ် - Speccy ကိုသုံးပါ - ဒီနေရာမှာ ယူလို့ ရပါတယ်။ Speccy နဲ့ Run လိုက်ရင် ဘာတွေ သိနိုင်မလဲ ဆိုတော့ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ ကိုယ့်စက်ရဲ့ System informations တွေကို အထိုက်အလျောက် သိနိုင်ပါတယ် - ဥပမာ ပြောရရင် မေးခွန်းတစ်ခု မေးရာမှာ ဖြေကြားပေးသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ မဖြစ်မနေ သိထားဖို့ လိုအပ်တဲ့ -
တွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကို အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း နေရာ တစ်နေရာတည်းကနေ ချက်ချင်းသူက ဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ် - System Information နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဒီ့ထက်မှပို အသေးစိတ် ဖော်ပြပေးချင်သေးတယ် ဆိုရင် SIW - System Information for Windows ဆိုတဲ့ tool တစ်ခု ရှိပါသေးတယ် - ဒီနေရာမှာ ယူနိုင်ပါတယ် -
အဲ့ဒီ့ Tools တွေကနေ သုံးပြီး ရှာလို့ရလာတဲ့ System informations တွေနဲ့အတူ မေးမြန်းလိုတဲ့ မေးခွန်း အမျိုးအစားကိုလိုက်ပြီး ထိုက်သင့်သလို ဖော်ပြပေးကြပါ -
အရေးတကြီးနှင့် အရေးပေါ် ဆိုသော မေးမြန်းချက်များအား ဖြေကြားသူများ ရှောင်တတ်ပါသည် - မေးခွန်းမေးမြန်းတဲ့ နေရာမှာ အရမ်းအရေးကြီးနေလို့ပါ - အရေးပေါ် ဖြစ်နေလို့ပါ ဆိုတာမျိုး တတ်နိုင်ရင် မဖော်ပြပါနဲ့ - ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အရေးကြီး အရေးပေါ် ဆိုတဲ့ ဖော်ပြချက်ဟာ ဖြေကြားသူကို ပြည့်စုံမယ့် အဖြေတစ်ခု ဖြေကြားပေးနိုင်ဖို့ လုံလောက်မယ့် ပြင်ဆင်မှု လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် အချိန်မပေးနိုင်တော့ဘူး ( ဝါ ) ဦးစားမပေးနိုင်တော့ဘူး ဆိုတဲ့ သဘောကို သက်ရောက်စေပါတယ် - ကိုယ့် အခက်အခဲ မဟုတ်တဲ့ ပြဿနာရပ် တစ်ခုကို မျက်စိရှေ့မှာ ဘာမှ မတွေ့မြင်ရပဲ ချက်ချင်းကြီး ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့ ဆိုတာ တော်ယုံမဖြစ်နိုင်ပါဘူး - အဲ့လို အခြေအနေမှာ စိတ်ထဲ ထင်မိတာကို ချက်ချင်း Reply ပြန်လိုက်ပြန်ရင်လည်း ဖြေလိုက်တာပဲ အဖတ်တင်ပြီး ဖြစ်တဲ့ပြဿနာ မပြေလည်မှာ စိုးတာကြောင့် ဖြေကြားဖို့ ရှောင်တတ်ကြပါတယ်။
Private E-mails ပေးပို့ မေးမြန်းမှုများသည် ဖြေကြားသူအား အခက်တွေ့ စေပါသည် - မိမိနဲ့ ခင်မင်ရာ ခင်မင်ကြောင်း ရင်းနှီးနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ဆီ ကိုယ့် အခက်အခဲအတွက် Private E-mails ပေးပို့ မေးမြန်းခြင်းမျိုးဟာ မေးမြန်းတဲ့ အကြောင်းအရာပေါ် မူတည်ပြီး ဖြေကြားပေးမယ့်သူအပေါ် အကျပ်တွေ့စေပါတယ် - လူတိုင်း လူတိုင်းမှာ သူနားလည် အားသန်တဲ့ အကြောင်းအရာ ကိုယ်စီ ရှိတတ်ကြပေမယ့် - လူတိုင်းဟာ ပြဿနာရပ်တိုင်းကို ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ စွမ်းရည် မရှိကြပါဘူး - ဒါတင်မက ကိုယ်က ဒီတစ်ခါလေးပဲ Private E-mail နဲ့ အကူအညီတောင်းဖူးသေးတာလို့ ယူဆနေပေမယ့် တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်းမှာ ကိုယ်လို တစ်ကြိမ်တစ်ခါတည်း အကူအညီတောင်းဖူးပါတယ်ဆိုတဲ့ E-mails မျိုးတွေ ဖြေကြားသူ ဘက်မှာ ဘယ်နစောင်လောက် ရှိနှင့်နေမလဲ ဆိုတာ ငဲ့ကွက် စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက် ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်ကို Respect ပေးပါ။ Private E-mails ပေးပို့ မေးမြန်းတာမျိုးထက် လူအများ ဝိုင်းဝန်း ဖြေကြားပေးနိုင်အောင် အမေးအဖြေကဏ္ဍ အောက်မှာပဲ Public မေးမြန်းမှုမျိုး လုပ်ဆောင်ပေးကြဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။
ယဉ်ကျေး ညက်ညောမှု မရှိသော ပြန်ကြားချက်နှင့် မေးမြန်းမှုများအား ဖြေကြားသူများ ရှောင်တတ်ကြပါသည် - ဖိုရမ်မှာ မေးမြန်းမှု တစ်ခု တက်လာခဲ့ရင် မိသားစုဝင်တော်တော်များများ ဖြေကြားပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားတတ်ကြပါတယ် - တစ်ချို့လည်း တတ်သလောက် နားလည်သလောက် ဝင်ပြောကြတယ် - တစ်ချို့လည်း အသေးစိတ် - တစ်ချို့လည်း အပေါ်ယံ - တစ်ချို့လည်း သာမန်ကာလျှံကာ - ဘယ်လို Reply ပဲ ပြန်ရသည် ဖြစ်စေ - မေးမြန်းသူ အနေနဲ့ ကိုယ့်ပြဿနာကို ပြေလည်နိုင်စေဖို့ ကူညီဖြေကြားပေးသူတွေကို ခုလို ကူညီပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် - ဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါ ဆိုတဲ့ ကျေးဇူးတင်စကားမျိုး Reply မှာ အဦးဆုံး ပြောကြားပေးပြီးမှ ကိုယ့်ပြဿနာ ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ပြေလည်မှု အဆင့်ဆင့်ကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ် - အဲ့လို Reply ပြန်ရခြင်း အားဖြင့် ဝင်ရောက် အဖြေရှာပေးသူအတွက်လည်း ကိုယ်ဖြေကြားပေးလိုက်တဲ့ ပြဿနာရဲ့ ပြေလည်မှု အဆင့်ကို သိရလို့ ကျေနပ်မှု ဖြစ်စေသလို - အကယ်၍ မပြေလည်ခဲ့သေးဘူး ဆိုရင်လည်း ဘာတွေ ဖြည့်စွက်ဖို့ လိုဦးမယ်ဆိုတာ ကူညီဖေးမလိုစိတ် ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အပြင် - ဘေးကရပ်ကြည့် နေသူတွေ အနေနဲ့ပါ ကိုယ်သိထားတဲ့ အလျှောက် ဝင်ရောက် ကူညီလိုစိတ် ဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်။ သူ့ရဲ့ ပြောင်းပြန် အနေနဲ့ Reply ပြန်လိုက်ပေမယ့် အဆင်ပြေမှန်း မပြေမှန်း ဘာမှ မသိရတဲ့ မေးမြန်းချက်မျိုးတွေ - ကျေးဇူးတင်စကား ပြောဖို့ကျ စကားမဟပဲ ကိုယ့်ဘက်က အဆင်မပြေတာတွေ -ခင်ဗျားပြောတဲ့ အတိုင်း လုပ်လိုက်တာ ဘယ်လိုတွေတော့ ဖြစ်ကုန်ပြီ ဆိုတဲ့ အပြစ်တင်စကားမျိုး ပြောတဲ့ ပြန်ကြားချက်မျိုးတွေဟာ ဖြေကြားသူအတွက် စိတ်ကွက်စေသလို - အခြားဖြေကြားပေးမယ့် သူတွေကိုပါ လက်ရှောင်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
ဘာတစ်ခုမသိသည့် မေးမြန်းချက်မျိုးအား ဘာမှမသိသကဲ့သို့ ဖြေကြားသူများ ရှောင်တတ်ကြပါသည် - မေးခွန်းဆိုတာ မေးတိုင်း မကောင်းပါဘူး - Differential equations တွေရဲ့ ဖြေရှင်းပုံကို နားမလည်ပဲ Biological process တွေ - Technical process တွေ - Bridge design တွေအကြောင်း နားလည်နိုင်ဖို့ မကြိုးစားချင်ပါနဲ့ မသိချင်ပါနဲ့ - ဆိုလိုတာ ကကြီး ခခွေး မရေးတတ်ပဲ စာစီမကုံးချင်ပါနဲ့ - အဆင့်မြင့်မြင့် သိချင်တဲ့အခါ အခြေခံ နားလည်ရမယ့် အချက်တွေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ နားလည်ပြီးသား ဖြစ်ဖို့ မိမိကိုယ်ကိုယ် အရင်တည်ဆောက်ပါ။
ကျွန်တော် ခုဖော်ပြခဲ့သလောက်ဆိုရင် မေးမြန်းမှု အတတ်ပညာရဲ့ နက်နဲပုံနဲ့ မေးမြန်းသင့်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို မိသားစုဝင်များ နားလည်နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ လေ့လာပါ - မေးမြန်းပါ - သို့ပေမယ့် မေးမြန်းသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာ - မေးမြန်းသင့်တဲ့ နေရာနဲ့ မေးမြန်းပုံ မေးမြန်းနည်းကိုတော့ အစဉ်သဖြင့် ဂရုပြုကြဖို့ တိုက်တွန်းအကြံပြု လိုက်ပါရစေ။
Last edited by KznT; 26-03-2011 at 09:13 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 70 ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, ချစ်သမီး, စမောလေး, စွမ်းကမ္ဘာ, စနိုးလေး, ဇင်ယော်, တာတာ, တီဘွား, တီး, ဒဿဂီရိ, မျိုးလေး, ယွန်းယွန်း, ရှင်းသန့်, လမင်းမျက်နှာ, ဝင်းကျော်ဦး, ဝင်းအောင်, ဝိုင်ပီဝိုင်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, တောဂေါ်လီ, နေမင်းမောင်, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, ဟေမာန်ဆောင်း, အောင်မော်, ဝေယံ, ငြိမ်းချမ်း, မြင့်မိုရ်, နိုးတူး, amaung344, arkaraung, Aung Aung, aungthuphyo, AZM, bagothar85, blackNwhite, bonge, crush, Empathlover, frogfish, g00gle, hellboy, jesse, july20, kaung kin lu, kkawave, kyaukphyu, kyaw85, maJunior, manawphyu, minthike, minthumon, moe cho, moe san dar, moethout, moe_poung, Nyi Nyi Zaw, pannuko, phyomyintthein, putty, PyaitSone, smlat88, theal2009, thetzin, tu tu, victor10, yawnathan, zo
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 05:04 PM